DHEGAYSO: Idaacadda VOA oo Warbixin Xasasi ah ku shaacisay Qaabka Alshabaab u dhex gasho DF-Somalia | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
DHEGAYSO: Idaacadda VOA oo Warbixin Xasasi ah ku shaacisay Qaabka Alshabaab u dhex gasho DF-Somalia
Aug 13, 2019 - 3 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Barnaamijka Galka Baadhista ee idaacadda VOA ayaa toddobaadkan lagu soo qaatay inta ay la egtahay Xubnaha Gacan saarka la leh Kooxda Alshabaab ee ku dhex jira Dawladda Soomaaliya.
Arintan ayaa soo shaac baxday kadib markii gabdho la shaqeeya kooxdan ay fuliyeen qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, 24-kii July 2019 Taasi oo lagu dilay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir.
Waxyaabaha yaabka leh ee Barnaamijka uu shaaca ka qaaday ayaa ah in Alshabaab ay inta badan ku guul-darreysato inay xubno ay soo dirto ay soo dhex-geliso dowladda, balse dadka la shaqeeya ay yihiin kuwa dowladda horey ugu jiray.
Waxyaabaha kale ee fashilka ku ah dowladda, islamarkaana sahla in Alshabaab ay ka dhex-shaqeysato, ayaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka tirada badan ee lagu sameeyo saraakiisha Amniga dowladda.
Xubin horey uga tirsanaa Alshabaab ayaa shaaca ka qaaday saddex hab oo Alshabaab ay adeegsato oo ay ku dhex-gasho dowladda Soomaaliya.
HALKANKA DHEGAYSO WARBIXINTA IYO ARIMO XASASI AH
Barnaamijka Galka Baadhista oo Xiiso badan waxaa soo jeedinaya Wariye Haaruun Macruuf.
Warbixinta dhamaan waa dhegaystay. Dawlada Soomaaliya iyo maamulka Banaadir labaduba way diideen in qaadaha barnaamijka/weriyaha u ogolaadaan inuu su, aalo weydiiyo! Waxay tusaale ahaan diideen in ay su, aal ah; Yaa ka shaqaysiiyay gabadha ka jawaabaan!!!
Villa wardhiiglay kuwa gudaheeda lagu ilaaliyo kuma haboona in dawlad lagu sheego, waa MAAFIYA!
Hadeer uunbeey Somalida caqliga xun soo fahmeeysaa in isbadbadalka badan ee xukuumad kasta 4 sanno lagu baddalo, eey keeneeyso in eey sii tayo xumaadaan, dad markii horeba aanan tayo badan laheeyn.
Ciyaal xun xun oo consultants, isku sheega, iyo carab xun ayaa dhagaha uGu sheegay Somalida caqliga xun, “isbadal doon” maba fahamsana, in is badalka uu u darran yahay dad caqli daanyeero leh, oo eey uga fiicantahay joogteeynta nidaamkii markii horeba jilicsanaa, iyo qashinkaan tuugta wada ah, ee magac dowlad rabba in eey ilmaha ku korsadaan. Ma shaqeeystayaal, iyo loser ka aduunka oo dhan ayaa raba in eey kamid noqdaan dowladda dhexe ee Somaliya ee 10 ka kun oo qof ka shaqeeystaan. Markii eey taas ku filnaan weeysay ma shaqeeystayaasha ragga Somaliyeed, ayeey waxeey keeneen in eey hadanna sameeystaan xildhibaano iyo wasiiro iyo madaxweeynayaal maamulo qabiilo oo ciidaas kabadan.
Dabcan tayo xumadaas dad leh, iska dhicin karraan argagixisda alshbaab oo ah mafia abaabulan, oo handada shacabkaan caqliga xun ee Somaliyeed.
Cadaado adeer, waxaa jirtay WAA aan qoraallo badan ka body jiray oon kuwaaga akhrijiray XITAA waxaan kaa yeelay inaanan dhanka Jubbada Hoose Kismaayo, Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Waxba ka sheegin. Waxaan is lahaa WAA nin dhalliyaraa oo soo koraaye Halla cilaakhtamin LAAKIIN waan ka shallaayay oo waxaa ii caddaatay inaad tahay NIN dhallinyara oo ismahadiyay oo garaadkiisu-na siiyay inuu la caytamo Barawaani Luuqadiisuna (cadaado) noqotay CAY IYO INUU cawro iyo wax lagu yaqsado ka sheekeeyo. War hooy caga dhigo oo isku noqo AMA sida Barawaani maryaha tuur. WBT